musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » More Pegasus UK kuenda kuTurkey nendege izvozvi sezvo Turkey yakavhurazve
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Turkey Kuputsa Nhau • UK Kuputsa Nhau
Pegasus adzoreredza nendege dzakananga kuIstanbul Sabiha Gökçen Airport kubva kuLondon Stansted, nendege mbiri-dzezuva nezuva dzichimuka nguva dza14: 40 na00: 05 kubva kuLondon Stansted Airport, nekudzoka kubva kuIstanbul Sabiha Gökçen Airport na11: 35 na21: 00.
Sezvo Turkey painovhurazve, Pegasus Airlines inopa dzimwe ndege kubva kuLondon Stansted neManchester.
Pegasus inobhururuka ichienda kunzvimbo dzinopenya zuva dzinosanganisira Antalya, Bodrum, Dalaman, Izmir, Istanbul uye nezvimwe muTurkey nekupfuura.
Tichifunga nezve chiziviso chitsva chinodzosera Turkey mune amber runyorwa, Pegasus ari kuona kukura kwakasimba mukubhuka kwayo kuTurkey kubva kuEngland.
Sezvo zhizha rinotendeuka kuita matsutso, bhururuka uende kune imwe yezuva yegoridhe, mahombekombe ane jecha uye kuona-kusingaone vanhu. Kutevera chiziviso chekuti Turkey yakaenda kuEngland runyorwa runyorwa musi wa22 Gunyana 2021, inotungamira yakachipa-mutakuri, Pegasus Airlines, yakawedzera hurongwa hwayo uye huwandu hwayo hwenhandare dzakananga kubva kuLondon Stansted neManchester kuenda kuTurkey nekupfuura.
Pegasus adzoreredza nendege dzakananga kuIstanbul Sabiha Gökçen Airport kubva London Stansted, nendege mbiri-dzezuva nezuva dzinobva pa14: 40 na00: 05 kubva kuLondon Stansted Airport, uye dzichidzoka kubva kuIstanbul Sabiha Gökçen Airport na11: 35 na21: 00. Ndege dzave kutengeswa kubva pa- $ 49.99 kuenda-imwe chete. Ndege shanu-dzevhiki dzakanangana nendege dzave kushandawo kubva kuManchester Airport kuenda kuIstanbul Sabiha Gökçen Airport, ichibva na12: 50, nendege dzichidzoka kubva kuIstanbul Sabiha Gökçen Airport na09: 45 (nguva dzemuno dzinoshanda). Imwe-nzira fares kubva kuManchester iri kutengeswa izvozvi kubva ku £ 74.99. Dzese nzira dzinopa zvakanakira kuenda kumberi kwePegasus 'network yenzvimbo makumi matatu neshanu muTurkey, kusanganisira kunzvimbo dzinozivikanwa dzemahombekombe dzinozorodza tsika nekuzorora, senge Bodrum, Dalaman neAntalya - pamwe nedzimwe nzvimbo dzayo makumi matanhatu neshanu.
Pegasus AirlinesChirongwa chakawedzerwa chinosanganisira kashanu-vhiki nevhiki nendege dzakanangana kubva 21 Gumiguru pakati peLondon Stansted neIzmir, kuAegean coast, Turkey, nendege dzinoenda na12: 55 kubva kuLondon Stansted, uye kudzoka kwendege dzinobva Izmir Adnan Menderes Airport na10: 05 (nguva dzenharaunda shandisa). Dzakananga ndege kuIzmir dziri kutengeswa izvozvi kubva ku $ 59.99. Pegasus ichave iri kuvhura nendege dzakananga pakati peLondon Stansted neAntalya yemwaka wechando musi wa20 Gumiguru.
Pegasus Airlines CCO, Güliz Özturk akati: "Tichifunga nezve chiziviso chitsva ichi chadzosera Turkey mu amber runyorwa, tiri kuona kukura kwakasimba mukubhuka kwedu kuenda kuTurkey kubva kuEngland, uye mukupindura kudiwa uku kuri kukura uye chishuwo chekufamba kwematsutso, isu ' takafara zvakare kuwedzera chirongwa chedu chekubhururuka kubva kuLondon Stansted neManchester kuenda kuTurkey, nehukama hwakanakisa padandemutande redu renzvimbo 119 munzvimbo 44 - zvichireva kuti vafambi vane zvakawanda sarudzo pamwe nemabhezari edu akasarudzika echando uye echando. Tiri kuronga kuwedzera nhamba dzendege dzedu kubva kuEngland mumashure mevhuvhu kana kudiwa kuchiramba kuchikwira, uye tiri kutarisira zvikuru kugamuchira vaenzi vedu vachidzoka sezvo kufamba kuchatanga kuvhurwazve. ”
Zvakare netiweki yakakura muTurkey, Pegasus Airlines inobhururukawo ichienda kunzvimbo zana nemakumi manomwe neshanu munyika makumi mana neshanu, kusanganisira nzvimbo dzakadai seDubai, Tel Aviv uye Sharm el-Sheikh, ichipa ndege dzisingadhuri dzakananga uye nekubatana zvisina musono pane imwe yemafambisi madiki eEurope. .
Pegasus inonyanya kukoshesa hutano uye chengetedzo, ine yakazara Covid-19 yekuchengetedza matanho aripo anosanganisira mamask anodiwa pabhodhi. Pegasus yaivewo imwe yendege dzemutengo wepasi pasi wekuyedza chirongwa cheIATA chine chekuita nezvehutano Kufamba Pass app uye nendege inopa isingabate boarding uye kudonhedza bhegi ne Express Kiosks muTurkey.